ဒုစရိုက်မှုများ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 23, 2007, 3:03 am
Filed under: Articles, My Opinion
ကျွန်မကပဲ ဥာဏ်မမှီတာလား ၊ စဉ်းစားပုံနည်းနေတာလား မပြောတတ်ဘူး .. ။ အထူးသဖြင့် အာဆီယံနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပေါ့ .. ။ မြန်မာပြည်အာဏာရှင်ကို မလှိမ့်တပတ်နဲ့ သူတို့ထောက်ခံနေတာ ဘာအတွက်လဲ ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ သူတို့လုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးအချို့ကြောင့်လား ၊ သက်သက်သာသာ ရနေတဲ့ သယံဇာတတွေကြောင့်လား .. ။ တကယ်လို့ စီးပွားရေးအရဆိုရင် မြန်မာပြည်တိုးတက်သွားရင် သူတို့အတွက် လမ်းပေါက်တွေ ပိုရလာမှာပေါ့ .. ။ အချင်းချင်း ပိုမိုတိုးတက်သွားရင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပိုမိုအားကောင်းလာမှာပါ .. ။ ဒါမှမဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုကို အပြည့်အ၀မပေးနိုင်သေးတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ပညာတတ်အာဏာရှင်တွေက မြန်မာပြည် လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားရင် သူတို့သိက္ခာကျမှာစိုးရိမ်လို့လား … ။ ဒါတွေက ကျွန်မတွေးမိတာလေးတာပါ .. ။
Myanmar is the big fresh fish for ASEAN,China and some other countries…..they care their benefits first……..Ok , when we become independent…they will become our enemies….we hate them…
DO NOT HELP? NEVERMIND…
DO NOT KILL A NATION.
Comment by myanmar child December 23, 2007 @ 12:42 pm
DO NOT KILL A NATION
Comment by myanmar child December 23, 2007 @ 12:44 pm